Accueil > Gazetin'ny nosy > Tafika tranainy: Miombon-kevitra amin’izy ireo ny « Emmo-Reg »:
Tafika tranainy: Miombon-kevitra amin’izy ireo ny « Emmo-Reg »:
Nikatona ho an’ny Tafika Tranainy ny kianjan’Antsahamanitra ny sabotsy teo. Ny antony dia noraran’ny tompomenakelin’ny fitondrana Hvm tsy ho azo ivorian’ireo tafika tranainy efa misotro ronono ao. Tonga maro teny anefa ireo tafika tranainy. Anjatony izy ireo no tonga teny. Hita teny koa ny renim-pianakaviana maromaro. Vadin’ireo tafika tranainy efa namoy ny ainy nefa tsy nisitraka ny zony akory, ny sasany tamin’izy ireo, raha ny akon’ny fanadihadiana natao. Nifanentana teo ny rehetra ka niazo ny kianjan’Ambohijatovo. Tsy nisy nisakana, ary tsy nikatona ho azy ireo koa ny kianja teny. Asa na may volon-tratra na te hamono afo ny eny anivon’ny fiadidiana ny Repoblika fa nisy hafatra an-telefanona tonga tamin’io fotoana io nilaza fa horaisin’ny filohampirenena ny alatsinainy maraina izao (anio izany) ny solontenan’ireto tafika tranainy. Nisy ny ady hevitra teo amin’ny samy mpiara-mitaky zo, ka isan’ny nisongadina ny hoe « raha ho eny Mavoloha dia tsy solontena izany no mankeny fa isika rehetra ». Nisy ny nanamarika fa « tetika hanohizan’ny filohampirenena handrirarirana ny fitakiantsika izany ka mila mailo isika ». Tao ny nihevitra fa « paika hanasamatsamahana ny firaisankinantsika izany ka aleo tsy mandefa solontena eny fa raha te hifampiresaka ny fitondrana dia manatona antsika ». Ny niombonan’ny rehetra hevitra tamin’io sabotsy io teo aloha dia mbola hifamotoana eny Ambohijatovo ny rehetra anio alatsinainy maraina amin’ny 8 ora ka eo no hahaitana izay hatao. Ny tsikaritra koa aloha, tsy nisy na iray aza ny herim-pamoretan’ny fitondrana jadona no tazana teny Antsahamanitra na Ambohijatovo. Ny re dia maro amin’ireo zandary sy polisy ary miaramila miara-dia ao amin’ny Emmo Reg no miombon-kevitra amin’ny fitakian’ireto Tafika Tranainy ireto.
Dfp: « Ny fanavotam-pirenena ihany no tarigetra »
Fotoana voalohany nihaonan’ny mpikambana ao anivon’ny Dinika ho Fanavotam-Pirenena (Dfp) tamin’ity taona ity no natao teny Ambohipo ny sabotsy tolakandro teo. Sady fivoriambe no fifampiarahabana sy fifampirariantsoa ary fifampaherezana noho ny taona vaovao 2018 koa.
Nisy ny jery todiky ny taona 2017 ary nibanjinana ny ho avy mandritra ity taona 2018 ity. Malaza moa fa « taom-pifidianana ity taona 2018 » ity saingy « lalana tsy maintsy lalovan’ny fiainam-pirenena ihany io, raha hisy tokoa », hoy Ratolojanahary Maharavo Doudou, mpandrindra foiben’ny « Dfp », fa « ny tolona ho amin’ny tena fampivoarana ny fiainam-bahoaka no tsy maintsy atrehina mandavan-taona, ary iarahan’ny vahoaka miatrika izany, mba hiarahan’ny vahoaka mahita sy misitraka ny vokatsoa avy aminy koa ». Notsindrian-dRatolojanahary Maharavo koa fa « ny fanavotam-pirenena hatrany no tarigetra ».
Tamin’ny fitodihana ny taona 2017 iny no nanoritany fa « mitohy koa ny fitetezam-paritra ataon’ny rafitra foiben’ny « Dfp » ka tamin’iny volana desambra lasa teo iny, ohatra, dia renivohi-paritany telo no notsidihana sy nanazavan-kevitra, dia ny tany Fianarantsoa, ny tany Toamasaina ary ny tany Mahajanga.